ဘန်ကောက် - Myanmar Getaway Travels Myanmar Getaway Travels
No-221(B) , Bo Myat Htun St., Middle Block, Botahtaung Tsp., Yangon, Myanmar.
(01) 245546, (09) 790790500, (09) 790790600
Tour Code: Tour Duration: ၂ ညအိပ် / ၃ ရက် Destination: ဘန်ကောက်မြို့
? 3*** အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်တွင်သုံးညတာတည်းခိုခများအားလုံး။
? ခရီးစဉ်တလျှောက် Air-con Coach အကြိုအပို့။
? ခရီးစဉ်တလျှောက် ဖော်ပြပါ နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်းနှင့် အလည်အပတ်ဝင်ကြေးများ။
? ဧည့်သည်တော်များသောက်သုံးရန်နေ့စဉ်ရေသန့် (၁) ဗူး။
? Myanmar Getaway မှ Tour Leader & ထိုင်း Local Guide တစ်ဦးတို့၏ လိုက်ပါဝန်ဆောင်မှု။
? Myanmar Getaway Travels & Tours မှပေးမည့်ခရီးသွားလက်ဆောင်မွန်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
✅ လေယာဉ်လက်မှတ် ( ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ရန်ကုန်)
✅ ခရီးစဉ်တွင်မဖော်ပြထားသောလည်ပတ်မှုများနှင့် ဝင်ကြေးများ
✅ ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင် သီးသန့်မှာယူစားသောက်သောရေသန့် အအေးနှင့် အဖျော်ယမကာများ
✅ ဟိုတယ်တွင်သုံးစွဲသောအဝတ်လျှော်ခ၊ဖုန်းသုံးစွဲမှု minibar အသုံးပြုခများ
✅ လေယာဉ် အဆင်းအတက် (Extra Kilo)
ီDay 01: Bangkok
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဘန်ကောက်မြို့ သို့ထွက်ခွာကြပါမည်။ ဘန်ကောက်မြို့ သို့ရောက်လျှင် မြဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ အပြန်တွင်ဘုရင့်နန်းတော်သို့သွား ရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည်စာကို စားသောက်ဆိုင်တွင် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့ နောက် လက်ဆောင်များကို ဈေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည့် MBK Shopping Mall သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ညစာကို Baiyoke Sky တွင် Buffet Dinner ဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် တနေကုန်ပင်ပန်းခဲ့သမျှကိုဟိုတယ်တွင် အပန်းဖြေကာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
ီDay 02: Bangkok
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော Madame Tussauds သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကာ နေ့လည်စာကို Restaurant တွင် တည်ခင်းဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် လက်ဆောင်များ ကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်မည့် Platinum Wholesale Shopping Mall သို့ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါမည်။ အပြန်တွင် ညနေစာကို Resturantတွင်သုံး ဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်၌ အပန်းဖြေအနားယူပြီး အေးချမ်းစွာအိပ်စက်ပါမည်။
ီDay 03: Bangkok
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Bangkok မြို့ပေါ်ရှိ နာမည်ကြီး ကစားကွင်းတခု ဖြစ်သော Dream World ကစားကွင်းတွင် ပျော်ရွှင်စွာကစားကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို Dream World တွင်Buffet lunchသုံးဆောင်ပါမည်။ ထို့နောက် Bangkok အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ထွက်ခွာ ပါမည်။ Airport Duty Free တွင် အိမ်အပြန် လက်ဆောင်များအတွက် ဈေးဝယ်ကြအပြီး Flight Counter Check-In လုပ်ကာ Bangkok လေဆိပ်မှ အမိမြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။